Tsy fantatra loatra: misy sokajy teatra ny Faribolana Sandratra - ewa.mg
News - Tsy fantatra loatra: misy sokajy teatra ny Faribolana Sandratra
Mitohy hatrany ny fiakarana an-tsehatra ho an’ny Faribolana Sandratra. Hatreto anefa, ny tononkalo sy ny fiantsana izany ihany no tena fantatry ny olona. « Manana sokajy hafa ihany koa izahay », hoy ny mpikambana iray…
Mitohy hatrany ny hetsika tontosain’ny Faribolana Sandratra. Tato ho ato, tsy nijanona tamin’ny tontolon’ny soratra intsony izany fa nivelatra tamina teatra ihany koa. « Hatramin’izay, ny tononkalo hatrany no nahalalan’ny olona ny Sandratra. Mbola vitsy ny mahafantatra fa misy sokajy mozika sy kabary ary teatra ao », hoy i Zo-Maminirina, mpikambana ao amin’ny Faribolana Sandratra. Nomarihiny hatrany fa na mikatona azy ny trano nilalaovana teatra nahazatra hatramin’izay, tsy mifidy toerana ny sokajy teatra ao amin’ny Faribolana Sandratra fa afaka milalao eo amin’izay sehatra omena azy, toy ny sekoly sy ny tranompokonolona. Efa tany amin’ny taona 1989 no efa nilalaovan’ny Faribolana Sandratra ny tantara « Mangahazo mamy » nosoratan’i Louis Vahandanitra. Taona 1998 ny « Andraso eo Paoly » diapenin’i Lydiary, taona 2006 ny « Ny variraiventy farany » nosoratan’i E.D Andriamalala, sns.
Amin’ity volana ity, ny asabotsy 27 jolay izao no hitondran’i Ny Iraka Rambolamanana sy i Nary Mamitiana ny antsa tononkalo « Rezatra » etsy amin’ny CGM Analakely.
L’article Tsy fantatra loatra: misy sokajy teatra ny Faribolana Sandratra a été récupéré chez Newsmada.
Fifaninanana iraisam-pirenena: tafakatra amin’ny « Africa Zikomo Awards » i Minah Bolimakoa
Reharehan’ny Malagasy ! Tafiditra ho anisan’ireo hiatrika ny dingana famaranana amin’ilay fifaninanana iraisam-pirenena, « Afrika Zikomo Awards » i Minah Bolimakoa. Fifaninanana izay ahitana sokajy maro, manasongadina ireo talenta aty Afrika izy ity. Ao amin’ny sokajy “Mpanakanto afrikanina vehivavy” no misy ity mpanakanto malagasy ity, ka dimy mirahavavy izy ireo no mifaninana amin’izany. “Efa tena zava-dehibe amiko ny voafidy hiatrika ny dingana famaranana. Mbola hanentanako antsika mpiray tanindrazana anefa hifidy ahy satria reharehan’i Madagasikara raha Malagasy no mahazo ny voalohany amin’io sokajy io”, hoy ny nambaran’i Minah Bolimakoa. Mbola manana hatramin’ny 30 marsa ireo hifidy, ao amin’ny tranonkala www.zikomoawards.com. Hotontosaina ny 9 avrily, any Lusaka Zambia kosa ny lanonana famaranana, izay hanasana ireo olona voafidy rehetra. Anisan’ny nanosika an’i Minah Bolimakoa ka nahatonga azy ho voafidy tamin’ity fifaninanana iraisam-pirenena ity ilay hira “Handeha tsy handeha”, niarahany tamin’ilay mpanakanto afrikanina Flamebot Universe. Nialoha izay anefa, efa maro koa ireo hirany fantatry ny maro, indrindra ireo voasokajy ho “world music”. “Tsy nialako ny world music fa eo ihany. Mitana hatrany ny fototra maha Malagasy koa aho, na dia mirona amin’ny afro pop sy afro beat aza”, hoy hatrany ny fanazavan’ity mpanakanto ity. Mikasika izay fivelarana sy fiaraha-miasa eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena izay indrindra, hanana vaovao lehibe izay hampahafantarina tsy ho ela i Minah Bolimakoa.Zo ny AinaL’article Fifaninanana iraisam-pirenena: tafakatra amin’ny « Africa Zikomo Awards » i Minah Bolimakoa a été récupéré chez Newsmada.
Fifaninanana fanatanjahantena: izay nahazo alalana ihany ny azo atrehina
Voakasika anatin’ireo sehatra nandraisana fanapahan-kevitra manokana ny lafiny fanatanjahantena, vokatry ny firongatry ny valanaretina Covid-19. Taorian’ny filankevitry ny minisitra, ny alarobia lasa teo, tapaka fa tsy mahazo intsony asiana mpanatrika, manomboka izao, ny fifaninanana fanatanjahantena rehetra, ankoatra ireo nahazo alalana manokana ka tanterahina ankalamanjana. Isan’izany voakasika manokana amin’izany ireo hetsika rehetra hatao anaty efitrano, toy ny haiady sy ny basikety ary ny volley, hatao anaty kianja mitafo. Na eo aza anefa izay fahazoan-dalana izay, ho an’ireo hetsika fanatanjahantena hatao ankalamanjana, mitoetra ho an’ny fifaninanana rehetra ihany koa ny fepetra amin’ny tsy fahafahana mamory olona mihoatra ny 200, raha ny voalaza anatin’ny tatitry ny filankevitry ny minisitra.Tsy nisy afa-nanoatra manoloana ity fanapahan-kevitra ity ny federasiona sy ny mpanao fanatanjahantena. Fahasalamana ny zava-dehobe ho azy ireo ka tsy maintsy manaraka ny lamina sy fepetra apetraky ny fitondram-panjakana. Mahakasika ireo fandaharam-potoana efa voafaritra kosa, hiezaka handamina sy hanamafy izay fepetra ara-pahasalamana izay ny federasiona sy ny mpikarakara. Manahy ny mety hisian’ny taona fotsy indray, toy ny taon-dasa, kosa, etsy andaniny, ireo atleta sy ny mpanao fanatanjahantena. Mi.RazL’article Fifaninanana fanatanjahantena: izay nahazo alalana ihany ny azo atrehina a été récupéré chez Newsmada.
POA-BASY TENY SOAVINA-TANJOMBATO :: Mpandraharaha vahiny roa lasan’ ny mpaka an-keriny tao anaty fiara
Nangingina kely dia miverina indray ny fakàna an-keriny na “kidnapping”. Sady nanapoaka basy no nitabataba nandrahona ny andian-jiolahy nanakana fiara tsy mataho-dalana iray nitondra Karàna lehibena orinasa teny Soavina Tanjombato manakaiky ny tetezan’i Hazovato, afak’omaly antoandro. Lasan’ireo jiolahy an-keriny tamin’izany ny lehilahy roa tao anatin’ny fiara, ka ny iray mizaka ny zom-pirenena frantsay raha Tonizianina kosa ny faharoa. Soa fa tsy nisy ny olona naratra na namoy ny ainy tamin’io fipoahana basy io. Samy mpandraharaha sy tompona orinasa i Sofiane Omrani sy Malik Karmaly, ireo nisy naka an-keriny, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny fikambanan’ireo Karàna mizaka ny zom-pirenena frantsay eto Madagasikara (Cfoim). Fantatra fa avy tao amin’ny toeram-pivarotana lehibe iray teny Tanjombato izy ireo no izao niharan’ny fanafihana teny an-dalana izao. Niaraka tamin’ny fiara iray nisy mpamily manokana izy roalahy, tamin’io fotoana io. Nosakanana sy notafihin’ny lehilahy manodidina ny efatra nirongo basy sy nitondra fiara roa ny fiaran-dry zareo, nony tonga teo amin’ny tetezan’i Hazovato. Nambaran’ny loharanom-baovao avy amin’ny mpitandro ny filaminana fa ny fiara nisy an’ireto teratany vahiny ihany no nitondran’ireo mpaka an-keriny azy ireo nandositra. Fiara navela teny Ambatobe. Ny polisy avy eny amin’ ny kaomisarian’ny polisy eny Tanjombato no tonga teny an-toerana voalohany rehefa naheno ny antso tamin’ny fisiana poa-basy sy fanafihana. Ny polisy misahana ny heloka bevava (Bc), avy eo, no nandray ny fanadihadiana. «Teo no ho eo ihany dia niroso tamin’ny fanenjehana sy fitadiavana an’ireo jiolahy ny mpitandro ny filaminana. Nampandrenesina ny tompon’andraikitra any amin’ny paositra sy ny biraon’ny mpitandro ny filaminana rehetra. Hita teny Ambatobe ny fiaran’ ireo Karàna nitondran’ ireo jiolahy azy ireo», hoy ny mpanao famotorana. Trangana fakàna an-keriny teratany vahiny fahatelo niseho teto an-drenivohitra, hatramin’ny volana novambra lasa teo, ity teny Soavina Tanjombato ity. Karàna ihany koa sady tompona orinasa lehibe ny lehilahy roa lasibatra, ankoatra azy roalahy farany ireo. Tamin’ity farany ity kosa no nahitana olona roa niara-nalaina tamin’ny toerana sy fotoana mitovy. Vao tamin’ny herinandro iny no nireharehana tao amin’ny filankevitry ny minisitra ny vokatra tsara azo tamin’ny famongorana an’ireo mpaka an-keriny izay ao anaty tambazotra mihitsy. Tsy mbola mahomby tanteraka, raha izao tranga vao niseho teny Soavina izao, ny fanafoanana ny fakàna an-keriny eto amintsika. L’article POA-BASY TENY SOAVINA-TANJOMBATO :: Mpandraharaha vahiny roa lasan’ ny mpaka an-keriny tao anaty fiara est apparu en premier sur AoRaha.